Zorin OS 15.2 Inosvika Inovandudza Chengetedzo uye Hardware Kuenderana | Linux Vakapindwa muropa
Ingori pasi pemwedzi mitatu mushure meiyo previous version, timu inogadzira imwe yeiyo distros iyo inotarisisa zvakanyanya kune switch dzinouya kubva kuWindows yakatanga Zorin OS 15.2. Haisi yekuvandudza yezvakakosha kwazvo zvinorangarirwa, asi zvinotevera nzira yakabudirira ye v15 yehurongwa hwekushanda iyo, sezvatinogona kuverenga mune kusunungura chinyorwayaunza zvinopfuura mazana mapfumbamwe ezviuru zveWindows nevashandisi veMacOS kuLinux mumwedzi mipfumbamwe yadarika.
Sezvo nekuburitswa kwese kutsva kweanenge chero masisitimu anoshanda, iyo sisitimu yekushandisa yakatora mukana wekuburitswa kutsva kugadzirisa kernel yayo uye iko zvino yashandura kushandisa Linux 5.3. Zorin OS yakavakirwa paUbuntu uye iyo kernel vhezheni iyo yaizoshandisa kubva nhasi yakafanana neiyo yanga ichishandisa system yakagadzirwa neCanonical kubva muna Gumiguru 2019, zvakanyatsoenderana nekutanga kweUbuntu 19.10 Eoan Ermine.
Zorin OS 15.2: Linux 5.3, yakagadziridzwa kunyorera uye yakachengeteka
Pakati pezvakakurumbira zvitsva zveiyi vhezheni, isu tine:
Iyo yekuvandudza timu inodaro mukuburitswa uku ivo vanga vachida kutarisisa pakunatsa iyo inoshanda sisitimu.
Kuchengetedza, kuenderana uye kugadzirisa mashandiro zvakawedzerwa, mamwe acho ane hukama neiyo kernel nyowani yavakaisanganisira.
Tsigiro yakawedzerwa yehardware nyowani, senge AMD Navi GPUs, kusanganisira iyo Radeon RX 5700, Intel's 10th Gen processors, kana zvazvino mamaki uye mapeti ekubata kubva kune nyowani MacBook uye MacBook Pro.
Uye zvakare, Zorin OS 15.2 yakasanganisira mitsva yekushandisa, kunyanya shanduro dzekupedzisira dze software senge LibreOffice kana GIMP.
Kune vashandisi vanofarira, mitsva ISO mifananidzo anowanikwa mu Iyi link. Kune avo vasina kumbozviedza uye vachida kuziva kuti zvakaita sei kushanda naZorin kekutanga, tinokurudzira kutanga Live Session neyekuteedzera software yakadai seGNOME Mabhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zorin OS 15.2 inosvika ichivandudza chengetedzo uye kuenderana kwehurhare
Ndinoona chiri chakanakisa kugovera. Ndakaishandisa kwenguva yakareba zvese kubasa nekushandisa pamba.
Ipo iine zvimwe zvakafanana neLinux Mint mupfungwa yekufambisa kupinda muGnu Linux nyika, maitiro ayo akasiyana.
Kusiyana neMint Zorin haina kuita inogadzirisika, zvichiita kuti zvive nyore kune vatsva kushandisa Windows. Inounza Zorin yekubatanidza iyo yakanaka kushandisa nhare paPC. Yayo yekuvandudza kutenderera kana zvasvika kuzvirongwa uye chengetedzo zvakanyanya kuramba zvichienderera uye zvechigarire, zvakasiyana neMint. Kana zviri zveZorin yekupedzisira yakabhadharwa, (izvo zvinoita sezvakanaka kwandiri sezvo vanogadzira vachifanirwa kubhadharira chirongwa neimwe nzira) chinyorwa chayo hachipiwi nemamwe mapurogiramu ainounza asi nenyaya yekuti inogamuchira rutsigiro kubva kune vanogadzira, inova yekutenda.
Muchidimbu, yakasimba, yakagadzikana, yemazuva ano, yakanaka, inyore-kushandisa-kugovera, yakanakira ma newbies.